Shina tongolo gasy vaovao sy orinasa | Nongchuanggang
Ny karazana tongolo lay mahazatra indrindra dia misy jirofo 10 (na fizarana) misy hoditra fotsy. Toy ny fitsipika, ny kelikely kokoa ny jirofo dia mihamafy ny tsiro! Tongolo gasy azo hanina manta na masaka. Ny tongolo lay manta dia manome tsiro mahery vaika, raha ny fandrahoan-tsakafo kosa manome tsiro malefaka kokoa. Mora mirehitra ny tongolo gasy, koa mitandrema rehefa manendasa na manoto. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny lovia legioma sy hena, lasopy, mandroboka, endasina, totozy ary laoka, na ampio jirofo tsy mifangaro ao anaty vilany misy hena na legioma.
Ny tongolo gasy dia azo ampiasaina amin'ny salady miovaova, rehefa manao salady aorian'ny nanapaka azy dia avela na ataovy lasa tongolo lay nopotsehina hiditra ao, ary rehefa vita dia hanao salady, miaraka amin'ny fofona mamy tongolo lay manan-karena, ho fanampin'izany, ny olona ao hena fandrahoan-tsakafo tongolo gasy na hena fangaro amin'ny hena hafa, koa afaka manampy tongolo lay.
Ny tongolo lay ihany koa dia azo atao sakafo pickled amin'ny fotoana mahazatra, voatanisa amin'ny tongolo gasy vaovao, azon'ny olona atao ny manasa azy rehefa avy nanasa tongolo lay vaovao, saosy mamy sy marikivy, hametahana azy ho lasa tongolo lay mamy sy marikivy, mety koa hamono azy io lasa sira tongolo lay masira, afaka mihinana mandritra ny taona, ankoatran'ireny fomba ireny, ny tongolo lay dia azo endasina ihany koa, afaka mangotraka rano hosotroina, natao ho an'ny sakafo maha-olona, ​​ary vatana salama, misoroka aretina.
Ny tongolo lay dia antibiotika voajanahary voajanahary, ny tongolo lay dia misy allicin 2% eo ho eo, ny allicin dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria, afaka mihetsika amin'ny cystine bakteria izy io mba hamoronana rotsakorana kristaly aorian'ny fidirana amin'ny vatan'olombelona, ​​manimba ny vondrona sulfhydryl ao anaty solifara biolojika vondrona amino ilaina amin'ny bakteria, mba hisehoan'ny fikorontanan'ny bakteria ny bakteria, ka tsy afaka miteraka sy maniry.
Ny fanadihadiana dia nanamafy fa ny tongolo lay manta dia misy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny fandeferana glucose amin'ny olon-tsotra, ary afaka mampiroborobo ny tsiranoka insuline ary mampitombo ny fampiasana glucose ao amin'ny sela sela, mba hampihenana ny haavon'ny glucose amin'ny ra.
Ny fihinanana tongolo lay manta isan'andro dia afaka mampihena ny fihenan'ny alika, indrindra ireo ateraky ny fiovan'ny mari-pana. Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny manomboka mihinana tongolo lay manta herinandro vitsivitsy alohan'ny vanim-potoana alergia.
Fomba Tongolo gasy vaovao sy vaovao
Karazana Tongolo lay, fotsy fotsy & fotsy madio
Karazana vokatra Sakafo tsy misy legioma
Lanja (kilao) 0,05
Laharana maodely F01
Antsipirian'ny fonosana Fonosana 10kg / baoritra, kitapo 10kg / harato, kitapo 20kg / harato, na fanarahana ny fitakian'ny mpanjifa
kilasy Manerana an'izao tontolo izao
niaviany Shandong, Sina
Teo aloha: Jirofo vita amin'ny tongolo lay